တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: မတူညီသော ရလဒ်များ …
ကလေးတွေကို ရှင်းပြ၊ ပြောပြတဲ့အခါ မမေရဲ့ ချဉ်းကပ်ပုံကို သဘောကျမိတယ်၊ သူတို့နားလည်တဲ့ ရှုထောင့်ကနေ အခုလို အတူလိုက်ပါပြီး ဆွဲခေါ်သွားတာ ထိရောက်မှုရှိမယ်လို့ ယူဆပါတယ်၊ ကလေးတွေအတွက် မြန်မာစာ စာအုပ်တွေ၊ စီဒီတွေ၊ ဒီဗီဒီတွေကို အခုထက်ပိုပြီး အရောင်စုံ၊ အသွေးစုံစေချင်တဲ့ ဆန္ဒ ကျနော်လည်း မကြာခဏ ဖြစ်မိတယ်၊ တိုင်းပြည်ပွင့်လင်းလာတာနဲ့အမျှ တိုးတက်လာမယ့် နည်းပညာ အကူအညီနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်လာမယ်လို့ပဲ မျှော်လင့်ရတာပါပဲ..၊
ကျောင်းကလေးနဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေ အကြောင်းကို အလျင်းသင့်သလို ရေးပါ မမေရေ...၊ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဖတ်ချင်မိတဲ့ အကြောင်းအရာ ပါပဲ...။
နောက်ထပ် မြန်မာပြည်မှာ ဆင်းရဲလို့ စာမသင်ရတဲ့ စာဆက်မသင်နိုင်တဲ့ ပို့စ်မျိုးလေးတွေလဲရေးပါဦးနော်..
ကျွန်မလဲ စာသင်ခန်းထဲက ကလေးတွေကို ရင်းရင်းနှီးနှီး သိကျွမ်းခဲ့ရဖူးသလို ကျောင်းမနေတဲ့ကလေးတွေတစ်ချို့ရဲ့ ဘဝ တစ်ပိုင်းတစ်စတွေကို သိခဲ့ဖူးတော့ ပညာရေးကို ခုထက်ပိုပြီး ထိရောက်စေချင်မိတာ အမှန်ပါ.. ကျောင်းနေပျော်တဲ့ကလေးတွေ အများကြီးရှိလာစေချင်သလို ကျောင်းမှာ နေပျော်အောင် (ကလေးတွေ အပြင်မှာ မပျော်အောင်) ဘယ်လိုများ ကိုယ်တွေတတ်အားသရွေ့ လုပ်ပေးနိုင်မှာပါလိမ့်နော်..
ကျောင်းမှာ လုပ်ခဲ့စဉ်ခဏမှာတော့ စာအုပ်မရှိသူတွေကို စာအုပ်၊ ခဲတံမရှိသူတွေကို ခဲတံ၊ ငွေကြေးအနည်းငယ် စသဖြင့်တော့ တတ်အားသရွေ့ ထောက်ပံ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အားသေးသေးလေးက သိပ်တော့ အရာမရောက်ခဲ့ဖူးပေါ့ မမေရေ
12/29/2012 4:49 AM
ကြီးမေရေ မင်္ဂလာပါ။ ကြီးမေက ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေးရင် မှတ်သားစရာတွေ အပြည့်ပါတယ်နော်။ ဘုန်းဘုန်းတောက်လည်း ကလေးတွေကို စာပြန်သင်ဖို့ ရှိနေတော့ သေချာကို ဖတ်၊ မှတ်သွားတယ် ကြီးမေရေ။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေနော်...
1/05/2013 4:42 PM
ကလေးတွေကို မြန်မာစာ သင်ပေးရတယ့်အခါ ကြုံတွေ့ ရတာတွေ ရေးပါဦး မမေ..ကလေးတွေ အားလုံး စာသင်ခန်းမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စာသင်ကြားနိုင်မယ့် အချိန်လေးကို မျှော်လင့်မိပါရဲ့ 
1/06/2013 8:48 PM
Mi Mi Kyaw said...
I am your fun since 2007 and we hadafew email contacts in 2007 or 2008. May be you do not remember. It was since before you left for UK.
Your posts are unique and always giveathought after reading them.
Recently I had not much chance to read the blogs as before and missed some of your posts.
Now, I find2new posts of yours are very interesting for me.
Are you working for May International Education and Training Center?
As I am very much interested, I checked in the Internet.
It isabit out-dated and not mentioning the location.
I haveadaughter of age 14 and I am very much concern about her education.
Furthermore, it is more interesting about your Buddhism class.
May be I cannot afford for the school if it is too expensive, but I want to get information. May be I can afford for Summer school.
Can you please kindly tell me to whom should I contact and where is it?
Anyway, I wish you best of luck, and more time and chance to write in your blog.